Ungayisusa kanjani i-Akhawunti ye-Gmail? - Ungakwenza Kanjani
Ngabe ufuna ukususa i-akhawunti yakho ye-Gmail ngokushesha futhi kalula?Uma kunjalo, sifake umhlahlandlela wesinyathelo nesinyathelo ukusiza ukususa i-akhawunti yakho ye-Gmail ngaphandle kwezinkinga. Ngakho ake ungene.Ngenkathi ususa i-akhawunti yakho ye-Gmail, bambalwa abahlinzeki besevisi abenza kube nzima ukukwenza ngokukufaka kuluphu.
Kepha namhlanje sikubhalele iposi lapho sizobe sixoxa khona ukuthi ungayisusa kanjani unomphela i-akhawunti yakho ye-Gmail, futhi sizobheka ezinye zezinto ezibalulekile okufanele uzicabangele ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho ye-Gmail.Ngakho-ke ngaphandle kokuhlala okunye, ake sibone izinyathelo zokususa i-akhawunti yakho ye-Gmail.
Izinyathelo zokususa i-akhawunti yakho ye-Gmail:
Ukususa i-akhawunti ye-Gmail akuwona umsebenzi onzima njengoba i-Google ikwenze kwaba nzima kumsebenzisi. Kufanele ulandele izinyathelo ezilula ngokucophelela ukususa i-akhawunti yakho ye-Gmail unomphela. Nazi izinyathelo ezimbalwa ukuthi uma ulandela i-akhawunti yakho izosuswa unomphela.
Ngena ngemvume ku I-akhawunti ye-Gmail bese uqhafaza ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini sakho lapho uzothola khona isithonjana sakho sephrofayela.
Ngemuva kokufaka uphawu esithombeni sePhrofayili, iwindi le-pop-up lizokwehla lapho kufanele uchofoze khona ku-'Phatha i-Akhawunti yakho ye-Google '.
Uzofakwa kuphaneli lokuphatha le-Akhawunti yakho ye-Google, lapho uzobe uthola khona izinketho eziningi zokuphatha i-akhawunti yakho. Manje kuzofanela uchofoze ku-‘Ukwangasese nokwenza kube ngokwakho. ’
Uma usuchofoze kulokho, uzoyiswa ekhasini ledatha nokuzenzela. Manje kufanele uskrolele phansi uye kuthebhu ethi 'Landa noma ususe idatha yakho' ukuze uchofoze ku-'susa insiza 'ye-Gmail.
Uma usuchofoze 'susa insiza yakho'. Uzoyiswa ekhasini lapho kufanele ukhethe insizakalo ofisa ukuyinqamula. Kulokhu, kufanele sikhethe i-Gmail.
Manje, kuzofanele unikeze elinye ikheli le-imeyili lapho uzobe uthola khona imeyili yokuqinisekisa ukususa i-akhawunti yakho ye-Gmail. Ngemuva kokufaka i-imeyili, ungakuqinisekisa futhi i-akhawunti yakho ye-Gmail izosuswa unomphela.
Izici ezibalulekile okufanele uzicabangele ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho ye-Gmail:
Yebo, ngaphambi kokuthi ususe noma yini kungadingeka ukuthi ubheke izinto ezimbalwa ezibaluleke kakhulu ezingasiza kakhulu uma i-akhawunti oyisusayo kuyi-akhawunti yakho eyinhloko. Lapha sibala izinto ezinhlanu ezibaluleke kakhulu okufanele uzinakekele ukuze ungalahlekelwa yilutho.
Lapho ususa i-akhawunti yakho ye-Gmail, ngeke ukwazi ukuthola nokuthumela noma iyiphi imeyili kunoma ngubani. Ikheli lemeyili olisebenzisayo lizosuswa ku-database, futhi kungashiwo ukuthi alitholakali. Uma othile ezama ukukuthumela i-imeyili noma idokhumenti kulowo mthumeli weposi uzohluleka futhi athole umyalezo wokwehluleka ukulethwa.
Ukugwema lokhu kungenzeki ungazisa umthumeli ngekheli lakho le-imeyili elihlukile ukuze ungaphuthelwa yilutho.
Uma i-akhawunti yakho ixhunywe nomhlinzeki wesevisi ovela eceleni-akhawunti yakho ivulelwe futhi ngeke ukwazi ukukufinyelela lokho. Umhlinzeki wesevisi ovela eceleni usho noma iyiphi insizakalo esebenzisa i-akhawunti yakho ye-Gmail ukungena ngemvume.
Ukugwema lokhu ukuthi kungenzeki ungavuselela imininingwane yephrofayili yomuntu wesithathu bese ufaka ikheli lakho le-imeyili elisha / elinye ukuze ukwazi ukufinyelela idatha yakho.
Uma ufisa ukufinyelela kunoma iyiphi idatha exhunywe kunoma iyiphi insizakalo ye-Google efana ne-Goole Photos, i-Google Amadokhumenti, amashidi e-Google, njll., Ngeke ukwazi ukukwenza ngoba i-akhawunti yakho eyinhloko isusiwe amasevisi ongeke uwasebenzise.
Ngakho-ke, ukuze uthole idatha ebixhunywe ku-akhawunti yakho, ungabuyisela emuva konke okudingekayo kuwe ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho.
Igama lakho lomsebenzisi ngeke litholakale kuwe noma kunoma ngubani ozolisebenzisa ngokuzayo ngoba i-Google izolivimba unomphela lelo gama lomsebenzisi ukuthi lisetshenziswe ngenxa yenqubomgomo yezokuphepha yakwa-Google.
Ngemuva kokususa i-akhawunti yakho yakwa-Google uma usafisa ukuyithola, usengakwenza kuphela emavikini ambalwa okususa i-akhawunti yakho ye-Gmail.
Noma ngabe ufuna ukuthola i-imeyili entsha noma ufuna ukususa i-akhawunti yakho endala, lo mhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo uzokusiza ukuthi ufeze inhloso yakho oyifunayo. Uzokwazi ukususa ngempumelelo i-akhawunti yakho ngemuva kokulandela lezi zinyathelo esizishilo ngenhla.
Uma lo mhlahlandlela ukusizile ukuthi ususe i-akhawunti yakho ye-Gmail, usazise ebhokisini lokuphawula elingezansi futhi uma uneziphakamiso maqondana nokufanayo ungazishiya.